အမြိုးသားထုကွီးရဲ့ အသဲကိုထပျခွှလေိုကျပွနျတဲ့ နနျးမှစေံရဲ့ အသဲယားစရာ ဗီဒီယိုဖိုငျလေး – Shwe Ba
အမြိုးသားထုကွီးရဲ့ အသဲကိုထပျခွှလေိုကျပွနျတဲ့ နနျးမှစေံရဲ့ အသဲယားစရာ ဗီဒီယိုဖိုငျလေး
မျောဒယျလျ နနျးမှစေံ့ က တော့ အခု လကျရှိ မှာ ဆိုရငျ ပရိတျ သတျ တှေ ရဲ့ စိတျ ဝငျစားမှု အမြား အပွား ရရှိနေ တဲ့ အနုပညာ ရှငျ တဈယောကျ ပါ ။ သူမဟာ အမိုကျ စား ခန်ဓာကိုယျ အခြိုး အစား ကိုလညျး ပိုငျဆိုငျ ထားတာ ဖွဈပွီး သူမရဲ့ ဆှဲဆောငျ မှု ရှိတဲ့ ပုံရိပျအလနျး တှဟော လညျး ပုရိသ တှရေဲ့ ရငျကို အမှနျ အကနျ ဟတျ ထိစေ တာ လညျး ဖွဈ ပါ တယျ ။ မှစေံ့ ဟာ မိမိကိုယျ ကို ယုံကွညျမှု ရှိတဲ့ အမြိုးသမီး တဈယောကျ အနနေဲ့ ရပျတညျ နတော လညျး ဖွဈပွီး ဆရာဝနျဘှဲ့ ရ တဈယောကျ လညျး ဖွဈပါ တယျ နျော … .
နနျးမှစေံ့ ဟာ အခု ဆိုရငျ ကိုယျ ပိုငျ brand နဲ့ အကြီ တှေ ထုတျ နတော လညျး ဖွဈပွီး အနုပညာ လှုပျရှားမှုေ တှကို ဆကျ တိုကျ ဆိုသလို လုပျ‌ ကိုငျ နတော တှေ့ ရပါတယျ ။ နနျးမှစေံ့ ရဲ့ ခပျ မိုကျမိုကျ ပုံစံလေး နဲ့ အလနျးစား ဖကျ ရှငျ ဒီဇိုငျးတှဟော လညျး ပရိသတျ တှေ ကွားမှာ ရပေနျး စား နတော ပဲ ဖွဈ ပါ တယျ နျော … .
မကွာ သေး မီ ကလညျး နနျးမှစေံ ဟာ သူမ ရဲ့ Instagram acc မှာ တငျထားတာ က တော့ ကားပျေါလေး မှာ နှုတျခမျး လေး စူပွ နရေငျး ဆှဲဆောငျ မှု ပိုနတေဲ့ အမိုကျ စား ဗီဒီယိုလေး ကို တငျပေး လာပါ တယျ ။ မှစေံ့ တဈယောကျ ကတော့ အမွဲ လိုလိုကို လနျးဆနျး တကျကွှ ပွီး ခဈြစရာ ကောငျးနေ တာ ပါ ။ ပရိသတျတှေ အတှကျ ပွနျလညျ မြှ ဝေ ပေး လိုကျ ပါတယျ နျော … .
photo credit : Nang Mwe San ’ s facebook acc
မော်ဒယ်လ် နန်းမွေ့စံ က တော့ အခု လက်ရှိ မှာ ဆိုရင် ပရိတ် သတ် တွေ ရဲ့ စိတ် ဝင်စားမှု အများ အပြား ရရှိနေ တဲ့ အနုပညာ ရှင် တစ်ယောက် ပါ ။ သူမဟာ အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် အချိုး အစား ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ဆွဲဆောင် မှု ရှိတဲ့ ပုံရိပ်အလန်း တွေဟာ လည်း ပုရိသ တွေရဲ့ ရင်ကို အမှန် အကန် ဟတ် ထိစေ တာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။ မွေ့စံ ဟာ မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မှု ရှိတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် အနေနဲ့ ရပ်တည် နေတာ လည်း ဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်ဘွဲ့ ရ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ် နော် … .
နန်းမွေ့စံ ဟာ အခု ဆိုရင် ကိုယ် ပိုင် brand နဲ့ အကျီ တွေ ထုတ် နေတာ လည်း ဖြစ်ပြီး အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုေ တွကို ဆက် တိုက် ဆိုသလို လုပ်‌ ကိုင် နေတာ တွေ့ ရပါတယ် ။ နန်းမွေ့စံ ရဲ့ ခပ် မိုက်မိုက် ပုံစံလေး နဲ့ အလန်းစား ဖက် ရှင် ဒီဇိုင်းတွေဟာ လည်း ပရိသတ် တွေ ကြားမှာ ရေပန်း စား နေတာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် နော် … .
မကြာ သေး မီ ကလည်း နန်းမွေစံ ဟာ သူမ ရဲ့ Instagram acc မှာ တင်ထားတာ က တော့ ကားပေါ်လေး မှာ နှုတ်ခမ်း လေး စူပြ နေရင်း ဆွဲဆောင် မှု ပိုနေတဲ့ အမိုက် စား ဗီဒီယိုလေး ကို တင်ပေး လာပါ တယ် ။ မွေ့စံ တစ်ယောက် ကတော့ အမြဲ လိုလိုကို လန်းဆန်း တက်ကြွ ပြီး ချစ်စရာ ကောင်းနေ တာ ပါ ။ ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှ ဝေ ပေး လိုက် ပါတယ် နော် … .